Docker Desktop haichazove yemahara kumabhizinesi uye ikozvino ichagadziriswa pasi pekunyorera pamwedzi | Linux Vakapindwa muropa
Mazuva mashoma apfuuras Docker akaburitsa nhau kuti ichagumira kushandiswa kweiyo yemahara vhezheni yayo yedesktop kunoshandiswa kumabhizinesi, uko uko muparidzi wemhinduro anozivisa kuiswa kwekunyoreswa kwemwedzi kumakambani makuru.
Urongwa hutsva uhu ichatanga kushanda munaKurume 1 wegore rinouya uye chikamu chekuchinja kwakazara mumitemo yeDocker yekupa marezinesi, sezvo CEO Scott Johnston vachiramba vachironga shanduko yekambani yemidziyo.
Pasi paJohnston, zvisaririra zvekambani zvashanduka kuti zviongorore kushandira vanogadzira vachivaka maapplication ane mudziyo, kunyanya kuburikidza neiyo Docker Injini yemidziyo yekumhanyisa, iyo Hub mufananidzo repository, uye iyo desktop app, iyo yakaiswa pamakomputa mamirioni 3.3 pakupedzisira.
Docker Desktop chishandiso graphical yekugadzirisa akasiyana zvikamu uye mabasa Docker, inosanganisira midziyo, mifananidzo, mavhoriyamu (mudziyo-wakasungirirwa chengetedzo), nharaunda dzakasimudzirwa, uye nezvimwe. Kunyange zvakawanda zvezvinhu zveDocker zviripo zveWindows, Mac, uye Linux, uye kunyangwe paine akawanda emidziyo yeDocker inomhanya paLinux, iyo Docker desktop inongowanikwa yeWindows ne Mac.
Nzvimbo yacho Docker ine akati wandei zvinhu izvo iyo Docker Dektop inongova chikamu. Mifananidzo yeDocker inotsanangura zvirimo mumidziyo, midziyo yeDocker zviitiko zvinogoneka zvemifananidzo, iyo Docker daemon iri yekushandisa kumashure iyo inogadzirisa uye inomhanyisa mifananidzo yeDocker nemidziyo.
Kune avo vasingazivikanwe nemutengi weDocker, iwe unofanirwa kuziva kuti iri rairo rekushandisa rinodaidza iyo Docker daemon API, matanda eDocker ane mifananidzo, uye iyo Docker Hub igwaro reruzhinji rinoshandiswa zvakanyanya. Zvizhinji zveDocker (asi kwete Desktop) yakavhurwa sosi pasi peiyo Apache v2 rezinesi.
Kusangana nematambudziko aya, nhasi tiri kuzivisa zvigadziriso uye zvinowedzerwa kune edu zvigadzirwa kunyoreswa: Pachedu, Pro, Chikwata, uye Bhizinesi. Izvi zvinonyoreswa zvigadzirwa kunyoreswa kunounza kugadzirwa uye vanobatirana vanogadzira vanovimba nezviyero, chengetedzo, uye akavimbika zvemabhizinesi zvemukati zvinoda, uye vanozviita nenzira inogadzikana yeDocker.
Iyo yemahara chirongwa ichadaidzwa Yega mune ramangwana uye kubva zvino zvichienda mberi, muparidzi weiyo application deployment automation solution zvinoda makambani ane vashandi vanopfuura mazana maviri nemakumi mashanu (kana izvo zvinoita mutero wemadhora anodarika gumi emadhora pagore) Nyorera kunyorera kwemwedzi kuti urambe uchishandisa Docker Desktop. Nezvo, sarudzo nhatu dzinounzwa: Pro, Bhizinesi kana Matimu emadhora mashanu, manomwe kana makumi maviri (pamushandisi uye pamwedzi) zvichiteerana.
Iyo nyowani Bhizinesi chikamu yeiyo Docker kunyorera, senge yapfuura vhezheni hombe, inopa invoice-based pricing, ancillary services, uye rutsigiro rwemunhu. Iyo Bhizinesi tier, yakatengwa pamadhora makumi maviri nemana pamushandisi pamwedzi, inosanganisira chinhu chitsva chengetedzo yakapihwa svondo rino inonzi Image Access Management, pamwe chete nechepakati SaaS manejimendi yenzvimbo dzakawanda dzekusimudzira Docker. Vashandisi vakuru varipo havazoone shanduko yemutengo, asi ivo vanowana Docker Desktop inosanganisirwa nemarezinesi avo.
Pro uye Team zvirongwa zvicharamba zvakafananaNepo vashandisi vakuru vebhizinesi, iri chirongwa chebhizimusi mune zvese asi zita, zvinoda kunyoreswa kwakabhadharwa kwezvimwe zviwanikwa sekurambidzwa kunyoreswa, kusaina kamwe chete, uye kuchengetedza software yekutengesa cheni.
Docker Vatengi vevanhu vacharamba vachiwana mukana wekupinda muDesktop, pamwe neDocker CLI, Docker Compose, Docker Injini, Docker Hub, uye Docker Official Mifananidzo.
Pakupedzisira kambani haina kuburitsa chaizvo kuti vangani vashandisi veDocker Desktop vanozofanira kutenga zvirinyore Pro-level kunyorera kuti vaenderere mberi. Chero ani Docker Desktop mushandisi ane yakabhadharwa Docker kunyoreswa achave nekodzero kune iyo software.
Kana iwe uchifarira kugona kuziva zvakawanda nezvazvo, unogona kubvunza ruzivo mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Docker Desktop haichazove yemahara kumabhizinesi uye ikozvino ichagadziriswa pasi pekunyorera kwemwedzi